﻿ ​‘माया नपाएका बेसाहराहरुको लागि माया घर’
​‘माया नपाएका बेसाहराहरुको लागि माया घर’
मोरंगबाट एसएलसी गरेर मेजर अंग्रेजी तथा व्यवस्थापन विषयमा छुट्टा छुट्टै स्नातकसम्मको अध्ययन गरेकी उनलाई परिवारको संस्कार र जीवनको खोजले अध्यात्मको अध्ययनको लागि प्रेरित गर्यो । फलस्वरुप उनी भारतको वृन्दावन पुगिन् । त्यहाँ आचार्यसम्मको अध्ययनपछि फर्केकी राधिका दासी जी नेपालका विभिन्न ठाउँमा लगाइएका पुराणहरुमा कथा वाचिकाको भूमिकामा रहीन् । अहिले उनी सुनसरीको इटहरीमा माया घर बनाउने अभियानमा छिन् । अशक्त तथा बेसहारा महिला, बालबालिका तथा पुरुष जोसुकैलाई राखेर सीप सिकाउन सकिने माया घर निर्माणका लागि उनी अहिले श्रीमद्भागवत जीवन दर्शन ज्ञान महायज्ञ लगाउने तयारीमा जुटेकी छिन् । उनीसँग सोही विषयमा गरिएको कुराकानी यसप्रकार छ ः
यो उमेरमा भागवत वाचिका हुने रहर कसरी जागेर आयो ?
हाम्रो भाग्य माथिबाट पहिलै लेखेर आएको हुन्छ रे । मैले ११ वर्ष शिक्षणमा बिताएँ । सानै उमेरदेखि पढाउँथेँ । एक्कासी वृन्दावन पुगेँ । त्यहाँ बस्दै जाँदा सोँच परिवर्तन भयो । यो बाटोमा लाग्दा आनन्द हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ । गुरुहरुको दीक्षा र मार्गदर्शनकै कारण आज म यहाँ छु । यसमा परिवारको संस्कारको पनि प्रभाव रह्यो ।
के हो माया घर नेपाल ?
असहाय, हिंसा पीडित महिला, बालबालिका र पुरुषहरुलाई ल्याएर सीपमुलक तालिम दिने, आश्रय दिने एउटा संस्था हो । यो संस्थामा महिला, पुरुष र बालबालिका सबै समेटिन्छन् । जो बेसहारा छन्, बिरामी छन्, अलपत्र परेका छन् । म गाउँ गाउँ पुग्ने क्रममा त्यस्ता धेरै असहाय, बेसहाराहरु भेट्छु । वहाँहरुलाई राख्ने र सीप सिकाउन सके हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । अहिले त्यही एउटा घर बनाउँदैछु ।
पुरुषको लागि पनि यस्तो घर चाहिन्छ र ?
पुरुषहरु पनि पीडामा पर्छन् । विदेश गएर फर्कँदा न घर, न सम्पत्ती, जीवनदेखि निराश भएका पनि छन् । कतिपय पुरुषहरु घरबाट निकालिदिए छोराछोरीले पनि भन्छन् । सहारा वहाँहरुलाई पनि चाहिन्छ ।
माया घर बनाउनको लागि भागवत महायज्ञ नै किन लगाउनु पर्यो ? पुर्वाञ्चलमै पहिलो पटक श्रीमद भागवत ज्ञान महायज्ञ सप्ताह तथा जिवन दर्शन ज्ञान यज्ञ हुँदैछ । यो के हो त ?
मैले सांसारिक र अध्यात्मिक दुवैतर्फ अध्ययन गर्दा हाम्रो जीवन जिउने कला कस्तो रहेछ भन्ने सम्बन्धिको ज्ञानहरु प्राप्त भयो । तब भागवत यसरी चाँहि बताउँदा खेरी हाम्रो जनमानसले बुझ्दो रहेछ र युवाहरुले पनि थाहा पाउँछन् भन्ने लागेर माया घरको लागि सहयोग जुटाउन पुराण लगाउन लागेका हौं । भागवतबाट ज्ञान पनि दिउँ र माया घरको सहयोग पनि जुटाउँ भन्ने दुवै उद्देश्य हो । जो आफ्नो जीवनदेखि विरक्त भएका छन्, उनीहरुलाई दार्शनिक ज्ञान चिन्तन दिन र उनीहरुको आत्मविश्वास बढाउनको लागि पुर्वाञ्चलमै पहिलो पटक यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ । यसमा जीवन दर्शनलाई समेत जोडेर लगेका छौं । यो इटहरीको हवाइ चोकमा पुस ८ गतेदेखि १५ गतेसम्म हुँदैछ ।
भागवतमा के छ ?
भागवतमा के छैन ? सबैभन्दा ठूलो त आनन्द छ । त्यसको लागि श्रवण गर्नुपर्छ । त्यसले दिने सन्देशलाई जीवनमा उतार्नुपर्छ ।
गीताका ज्ञानहरु मानिसको जीवनमा याद नभएको वा लागु हुन नसकेको देखिन्छ । किन होला ?
यो हामीले मानिसलाई बुझाउन नसुकेको हो । ध्यान नभएर पनि हो । के रहेछ यसमा भनेर थोरै मात्र चासो दिने हो भने पनि युवा पीढिँले आफ्नो कर्तव्य बुझ्छन् । व्यापारीले व्यापार गर्ने कुरा जान्छन् । जुनसुकै धर्मले पनि गीतालाई धार्मिकभन्दा पनि ज्ञानको किताबको रुपमा पढ्ने हो भने यसले मानिसभित्रको क्षमतालाई उजागर गर्छ । यसमा हिन्दूको कुरै गरेको छैन ।
संसारमा सबै विषयको जानकारी दिने विद्यालय छन् । तर शिक्षाको पहिलो खुड्कीलो संस्कार हो र संस्कारको विद्यालय संसारमा छैन । हामीले अभियानकै रुपमा नेपालका १६ वटा विद्यालयहरुमा संस्कारसम्बन्धि पढाइ भइरहेका छन् । काठमाडौ, विराटनगर लगायतका विभिन्न ठाउँमा छन् । हामी व्यवहारिक ज्ञान दिन्छौं । किताब पनि हामीसँग उपलब्ध छन् । यसलाई देशव्यापी लाने सोँच छ । प्रत्येक स्कुलमा भागवत गीता पढाउन आवश्यक छ ।
यो कामको लागि कस–कसको सहयोग छ ?
हाम्रो यो कामको लागि इटहरीका १० वटा संघसंस्थाहरुले सहयोग गरिरहनुभएको छ । अन्य व्यक्तिहरुको पनि सहयोग छ र सहयोग जुट्ने क्रममा छ । सबैको सहयोग भए मात्र हाम्रो उद्धेश्य पुरा हुन्छ ।
पहिला त हाम्रो कार्यक्रममा आएर कथा श्रवण गरिदिनुस् । सक्नुहुन्छ भने केही सहायता गर्नुहोस् । यो माया घर सबैको लागि हो । जिन्दगीदेखि विरक्त भएर बसेका महिला, बालबालिकाहरुको लागि सहयोगी बनोस् भन्न चाहन्छु ।